Linchpin: အစားထိုးမရတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အနုပညာ (ပထမပိုင်း)
26 Nov 2018 . 12:17 PM
Linchpin ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အခရာကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်စီးပွားပညာရှင်စာရေးဆရာ ဆက်ဂေါ်ဒင် (Seth Godin) က အနက်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီး Linchpin ဟာ ကျွန်တော်တို့တတွေ လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ သူမတူတဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ မသိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရေးရာနည်းနာသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆက်ဂေါ်ဒင်က အတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီအတိုင်းအလုပ်လုပ်နေရုံနဲ့တင် မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အချိန်မှန် လုပ်အားခအတွက် လုပ်စရာရှိတာတွေကို သမားရိုးကျ လုပ်ဆောင်နေသူတွေဟာ စက်ယန္တရားကြီးတစ်ခုရဲ့ ထင်သာမြင်သာမရှိတဲ့ ခွေးသွားစိပ်လေးတွေလိုပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ အဲဒီခွေးသွားစိပ်လေးတွေက အလွယ်တကူ အစားထိုးနိုင်ပြီး အရေးမပါလှတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတိုင်း လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ့် ဆက်ဂေါ်ဒင် ရေးသားပြုစုတဲ့ Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့နဲ့ မသိမဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်အနုပညာအကြောင်းကို အားလုံးဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဆီလျော်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ?
လူတွေအပါအဝင် စက်ရုံရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမဆို နေရာချင်းအစားထိုးနိုင်တဲ့ စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ်တွင်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Mechanical Turk နည်းဥပဒေသဟာ ငွေကုန်ကြေးကျမှုကို အလွန်သက်သာစေခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ကိုပုံမှန်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ သစ္စာစောင့်သိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကြောင့် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး ကောင်းကောင်း လည်ပတ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးစနစ်ဟောင်းက အလုပ်ရှင်နဲ့လုပ်သားနှစ်ဖက်ကြား သင့်တင့်မျှတတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အလုပ်တက်ရက်မှန်မှုကို အခြေခံပြီး ဆုပေးတဲ့စနစ်က အတိတ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီ။ ရာနှုန်းပြည့်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် လုပ်ငန်းတစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာရှိနေတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးမဖြည့်စွက်ပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အလိုအလျောက်စနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြသလို ပြင်ပပညာရှင်တွေဆီ ပေးအပ်လုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်ကျင်လည်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ရှေ့ကနေဦးဆောင်ဖို့ Linchpin တစ်ယောက် ဖြစ်မှရပါတော့မယ်။
ဒါဆို Linchpin တွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ?
Linchpin ဆိုတာ ပရမ်းပတာဖြစ်မှုကို အစီအစဉ်ကျအောင် ပြင်ဆင်နိုင်သူ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သူ၊ အခိုင်အမာချိတ်ဆက်နိုင်သူ၊ အရာရာကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
၁. ပြောင်မြောက်တဲ့အနုပညာကို ပြုလုပ်ဖန်တီးသူများ
Linchpin တွေဟာ သူတို့ရဲ့အနုပညာကို ဖန်တီးဖို့ အဆက်မပြတ် နည်းပေးလမ်းပြမှုတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ နေ့စဉ်သာမန်အလုပ်မှာ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ လုပ်အားကိုပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အနုပညာအဖြစ် ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာကနေပြီး Linchpin တွေဟာ တခြားသူတွေကို ဦးဆောင်ကြတယ်။ စိတ်အားထက်သန်စေတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေကို အစားထိုးဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာပါတယ်။
၂. အဟန့်အတားကို ယဉ်ပါးစေသူများ
Linchpin တစ်ယောက်ဟာ အချိန်မီပြီးစီးမှုအတွက် အဟန့်အတားနဲ့ အမြဲတမ်း ပဋိပက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်မီပြီးစီးဖို့အတွက် နှောင့်နှေးခံနေခြင်းက အချိန်ကို အကျိုးမဲ့ကုန်စေသလို အရေးမပါတဲ့ အရာတွေကို တွေးတောမိစေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ ဒါဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်းရဲ့လား? လူတွေ ငါ့ကိုလှောင်ကြမှာလား? ငါ့မှာရှေ့ဆက်ဖို့ အရင်းအနှီးလုံလောက်ရဲ့လား? ငါတို့မှာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံရှိရဲ့လား? အစရှိတဲ့ စိုးရိမ်ပူပင်မှုအဟန့်အတားတွေကို ဦးနှောက်ထဲက သိမြင်လက်ခံပေမယ့် Linchpin တစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် သူ့ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အနုပညာကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အဲဒီအဟန့်အတားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက်ထုတ်ပါတယ်။
၃. အသိုက်အဝန်းကို ပျိုးထောင်သူများ
Linchpin တစ်ယောက်ဟာ သြဇာညောင်းဖို့အတွက် အခွင့်အာဏာ မလိုအပ်ပါဘူး။ သူဟာ မည်သူနဲ့မဆို စိတ်ရင်းအမှန်အတိုင်း ဆက်ဆံတတ်တာကြောင့် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိသူ ဖြစ်လာမှာပါ။ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလိုပဲ Linchpin တစ်ယောက်ဟာလည်း သူ့ရဲ့အနုပညာကို တင်ဆက်ပြီး သူ့ရဲ့ပါရမီကို မျှဝေခြင်းအားဖြင့် အပေါင်းအသင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အလုပ်အပ်သူတွေ၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ နောက်လိုက်တွေကို ရရှိတတ်ပါတယ်။
၄. လက်ဆောင်အပေးအကမ်း ရက်ရောသူများ
Linchpin တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အနုပညာလက်ရာအများစုကို လက်ဆောင်တွေအဖြစ်ပေးပြီး ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ကြပါတယ်။ စီးပွားရေးစနစ်သစ်ဟာ အားထုတ်မှုထက် အနုပညာကို ပိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ ဆက်ဂေါ်ဒင်က ဆိုပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်ဟာ စိတ်အားတက်ကြွတဲ့ လုပ်သားတွေကနေပြီး အနုပညာမြောက်တဲ့ လုပ်အားလက်ဆောင်တွေကို ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ပေးအပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ အဲဒီလို အကျိုးထိရောက်မှုအားကောင်းတဲ့ လုပ်အားလက်ဆောင်တွေဟာ Linchpin တွေနားမှာ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးပြီး အဲဒီအသိုက်အဝန်းကတဆင့် စီးပွားဖြစ်အခွင့်အလမ်းအများအပြားကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။
၅. အလုပ်ကို မဖြစ်မနေပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်တတ်သူများ
Linchpin တစ်ယောက်ဟာ ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် အမြဲဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။ ပြောင်မြောက်တဲ့ အံ့မခမ်းအနုစိတ်လက်ရာတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက ပြီးစီးအောင်ပြုလုပ်ဖို့ပဲဆိုတာကို သေချာသိတယ်။ သူဟာ သူ့အလုပ်ကို လျှိူ့ဝှက်မထားသလို ခြောက်ပြစ်ကင်းနေဖို့ကိုလည်း အာရုံမစိုက်ပါဘူး။ အဲဒီအရာတွေကို သူ နှင်ထုတ်ထားပါတယ်။
Linchpin တစ်ယောက်ဟာ ငွေ သို့မဟုတ် အချိန်ကုန်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ အလုပ်ကို လက်စသတ်ပြီး ပြီးမြောက်စေတယ်။
အပိုင်း ၂ ကို နောက်ထပ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ စောင့်ဆိုင်းဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း ပြောလိုက်ရပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Linchpin: အစားထိုးမရတဲ့စှမျးဆောငျရညျနဲ့ လုပျငနျးခှငျအနုပညာ (ပထမပိုငျး)
Linchpin ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ အခရာကတြဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈတယျလို့ အမရေိကနျစီးပှားပညာရှငျစာရေးဆရာ ဆကျဂျေါဒငျ (Seth Godin) က အနကျဖှငျ့ဆိုခဲ့ပွီး Linchpin ဟာ ကြှနျတျောတို့တတှေ လုပျငနျးကိစ်စအဝဝလုပျဆောငျတဲ့အခါ သူမတူတဲ့အကြိုးရလဒျကောငျးတှေ ဖွဈပျေါလာစဖေို့ မသိမဖွဈလိုအပျတဲ့ လုပျငနျးရေးရာနညျးနာသဈတဈခုဖွဈကွောငျးကိုလညျး ဆကျဂျေါဒငျက အတိအလငျးဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ဒီနခေ့တျေမှာ ကြှနျတျောတို့တှဟော လုပျငနျးခှငျမှာ ဒီအတိုငျးအလုပျလုပျနရေုံနဲ့တငျ မလုံလောကျတော့ပါဘူး။ အခြိနျမှနျ လုပျအားခအတှကျ လုပျစရာရှိတာတှကေို သမားရိုးကြ လုပျဆောငျနသေူတှဟော စကျယန်တရားကွီးတဈခုရဲ့ ထငျသာမွငျသာမရှိတဲ့ ခှေးသှားစိပျလေးတှလေိုပဲ ဖွဈလာမှာပါ။ စီမံအုပျခြုပျသူတှရေဲ့ မကျြလုံးထဲမှာတော့ အဲဒီခှေးသှားစိပျလေးတှကေ အလှယျတကူ အစားထိုးနိုငျပွီး အရေးမပါလှတဲ့အရာတှဖွေဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ဒီဆောငျပါးမှာ လုပျငနျးခှငျဝငျနသေူတိုငျး လကျတှအေ့သုံးခနြိုငျမယျ့ ဆကျဂျေါဒငျ ရေးသားပွုစုတဲ့ Linchpin တဈယောကျဖွဈလာစဖေို့နဲ့ မသိမဖွဈလုပျငနျးခှငျအနုပညာအကွောငျးကို အားလုံးဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ဖတျရှုနိုငျဖို့ ဆီလြျောအောငျပွငျဆငျပွီး ရေးသားဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Linchpin တဈယောကျဖွဈဖို့ ဘာကွောငျ့လိုအပျသလဲ?
လူတှအေပါအဝငျ စကျရုံရဲ့ ဘယျအစိတျအပိုငျးမဆို နရောခငျြးအစားထိုးနိုငျတဲ့ စကျမှုတျောလှနျရေးခတျေတှငျးက အသုံးပွုခဲ့တဲ့ Mechanical Turk နညျးဥပဒသေဟာ ငှကေုနျကွေးကမြှုကို အလှနျသကျသာစခေဲ့ပါတယျ။ အလုပျကိုပုံမှနျလာတဲ့ ဝနျထမျးတှေ၊ စညျးကမျးလိုကျနာတဲ့ ဝနျထမျးတှေ၊ သစ်စာစောငျ့သိတဲ့ ဝနျထမျးတှကွေောငျ့ လုပျငနျးကွီးတဈခုလုံး ကောငျးကောငျး လညျပတျခဲ့ပွီး စီးပှားရေးစနဈဟောငျးက အလုပျရှငျနဲ့လုပျသားနှဈဖကျကွား သငျ့တငျ့မြှတတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့တှေ ပေးခဲ့ပါတယျ။
အခုခတျေမှာတော့ အဲဒီလိုမဟုတျတော့ပါဘူး။ အလုပျတကျရကျမှနျမှုကို အခွခေံပွီး ဆုပေးတဲ့စနဈက အတိတျမှာ ကနျြရဈခဲ့ပါပွီ။ ရာနှုနျးပွညျ့ကောငျးမှနျအောငျ လုပျဆောငျနပေမေယျ့ လုပျငနျးတဈထောငျ့တဈနရောမှာရှိနတေဲ့ လိုအပျခကျြကို အသေးစိတျ စဈဆေးမဖွညျ့စှကျပေးနိုငျတော့ပါဘူး။ အခုဆိုရငျ ရိုးရှငျးတဲ့ လုပျငနျးတာဝနျတှကေို အလိုအလြောကျစနဈနဲ့ လုပျဆောငျနကွေသလို ပွငျပပညာရှငျတှဆေီ ပေးအပျလုပျဆောငျနကွေပါပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကိုယျကငျြလညျရာလုပျငနျးနယျပယျမှာ ရှကေ့နဦေးဆောငျဖို့ Linchpin တဈယောကျ ဖွဈမှရပါတော့မယျ။
ဒါဆို Linchpin တှဆေိုတာ ဘယျသူတှလေဲ?
Linchpin ဆိုတာ ပရမျးပတာဖွဈမှုကို အစီအစဉျကအြောငျ ပွငျဆငျနိုငျသူ၊ တီထှငျဖနျတီးနိုငျသူ၊ အခိုငျအမာခြိတျဆကျနိုငျသူ၊ အရာရာကို ဖွဈမွောကျအောငျ လုပျဆောငျနိုငျသူဖွဈပါတယျ။
၁. ပွောငျမွောကျတဲ့အနုပညာကို ပွုလုပျဖနျတီးသူမြား
Linchpin တှဟော သူတို့ရဲ့အနုပညာကို ဖနျတီးဖို့ အဆကျမပွတျ နညျးပေးလမျးပွမှုတှေ မလိုအပျပါဘူး။ သူတို့ဟာ နစေ့ဉျသာမနျအလုပျမှာ စိတျခံစားခကျြနဲ့ လုပျအားကိုပေါငျးစပျပွီး လုပျငနျးခှငျအနုပညာအဖွဈ ပွောငျးလဲတတျကွပါတယျ။ အဲဒီလို ပွောငျမွောကျတဲ့ အနုပညာကနပွေီး Linchpin တှဟော တခွားသူတှကေို ဦးဆောငျကွတယျ။ စိတျအားထကျသနျစတေယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့တှကေို အစားထိုးဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖွဈနိုငျလောကျအောငျ ဖွဈလာပါတယျ။
၂. အဟနျ့အတားကို ယဉျပါးစသေူမြား
Linchpin တဈယောကျဟာ အခြိနျမီပွီးစီးမှုအတှကျ အဟနျ့အတားနဲ့ အမွဲတမျး ပဋိပက်ခဖွဈတတျပါတယျ။ အခြိနျမီပွီးစီးဖို့အတှကျ နှောငျ့နှေးခံနခွေငျးက အခြိနျကို အကြိုးမဲ့ကုနျစသေလို အရေးမပါတဲ့ အရာတှကေို တှေးတောမိစတေတျပါတယျ။ ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့အလုပျတဈခုပျေါမှာ ဒါဟာ ခွောကျပွဈကငျးရဲ့လား? လူတှေ ငါ့ကိုလှောငျကွမှာလား? ငါ့မှာရှဆေ့ကျဖို့ အရငျးအနှီးလုံလောကျရဲ့လား? ငါတို့မှာ အခကျြအလကျ အပွညျ့အစုံရှိရဲ့လား? အစရှိတဲ့ စိုးရိမျပူပငျမှုအဟနျ့အတားတှကေို ဦးနှောကျထဲက သိမွငျလကျခံပမေယျ့ Linchpin တဈယောကျဟာ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ သူ့ရဲ့လကျဆောငျဖွဈတဲ့ လုပျငနျးခှငျအနုပညာကို ဖနျတီးထုတျလုပျနိုငျဖို့ အဲဒီအဟနျ့အတားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုကျထုတျပါတယျ။
၃. အသိုကျအဝနျးကို ပြိုးထောငျသူမြား
Linchpin တဈယောကျဟာ သွဇာညောငျးဖို့အတှကျ အခှငျ့အာဏာ မလိုအပျပါဘူး။ သူဟာ မညျသူနဲ့မဆို စိတျရငျးအမှနျအတိုငျး ဆကျဆံတတျတာကွောငျ့ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ လှမျးမိုးမှုရှိသူ ဖွဈလာမှာပါ။ အနုပညာရှငျတဈဦးလိုပဲ Linchpin တဈယောကျဟာလညျး သူ့ရဲ့အနုပညာကို တငျဆကျပွီး သူ့ရဲ့ပါရမီကို မြှဝခွေငျးအားဖွငျ့ အပေါငျးအသငျးတှေ၊ မိတျဆှတှေေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ အလုပျအပျသူတှေ၊ ပရိသတျတှနေဲ့ နောကျလိုကျတှကေို ရရှိတတျပါတယျ။
၄. လကျဆောငျအပေးအကမျး ရကျရောသူမြား
Linchpin တှဟော သူတို့ရဲ့ လုပျငနျးခှငျ အနုပညာလကျရာအမြားစုကို လကျဆောငျတှအေဖွဈပေးပွီး ပေါကျမွောကျအောငျမွငျကွပါတယျ။ စီးပှားရေးစနဈသဈဟာ အားထုတျမှုထကျ အနုပညာကို ပိုတနျဖိုးထားတယျလို့ ဆကျဂျေါဒငျက ဆိုပါတယျ။ အဖှဲ့အစညျးတဈခုရဲ့ အနာဂတျဟာ စိတျအားတကျကွှတဲ့ လုပျသားတှကေနပွေီး အနုပညာမွောကျတဲ့ လုပျအားလကျဆောငျတှကေို ကိုယျကြိုးမဖကျဘဲ ပေးအပျခွငျးအပျေါ မူတညျနပေါတယျ။ အဲဒီလို အကြိုးထိရောကျမှုအားကောငျးတဲ့ လုပျအားလကျဆောငျတှဟော Linchpin တှနေားမှာ အသိုကျအဝနျးတဈခုကို ပွနျလညျဖနျတီးပေးပွီး အဲဒီအသိုကျအဝနျးကတဆငျ့ စီးပှားဖွဈအခှငျ့အလမျးအမြားအပွားကို ဖျောဆောငျပေးပါတယျ။
၅. အလုပျကို မဖွဈမနပွေီးမွောကျအောငျ လုပျဆောငျတတျသူမြား
Linchpin တဈယောကျဟာ ဘာတှပေဲဖွဈနပေါစေ အလုပျပွီးမွောကျအောငျ အမွဲဆောငျရှကျတတျပါတယျ။ ပွောငျမွောကျတဲ့ အံ့မခမျးအနုစိတျလကျရာတဈခုကို ဖနျတီးဖို့ တဈခုတညျးသောနညျးလမျးက ပွီးစီးအောငျပွုလုပျဖို့ပဲဆိုတာကို သခြောသိတယျ။ သူဟာ သူ့အလုပျကို လြှိူ့ဝှကျမထားသလို ခွောကျပွဈကငျးနဖေို့ကိုလညျး အာရုံမစိုကျပါဘူး။ အဲဒီအရာတှကေို သူ နှငျထုတျထားပါတယျ။
Linchpin တဈယောကျဟာ ငှေ သို့မဟုတျ အခြိနျကုနျတဲ့အထိ အလုပျလုပျတတျပါတယျ။ အဲဒါပွီးရငျတော့ အလုပျကို လကျစသတျပွီး ပွီးမွောကျစတေယျ။
အပိုငျး ၂ ကို နောကျထပျ တငျဆကျပေးသှားမှာမို့ စောငျ့ဆိုငျးဖတျရှုနိုငျကွောငျး ပွောလိုကျရပါတယျ။ စာဖတျပရိသတျမြားအားလုံးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။